बाहिरियो ठिमी ह’त्या का’ण्डका मृतक तीनै जनाकाे पो’ष्ट’मा’र्टम रिपोर्ट, केछ रिपाेर्टमा — Imandarmedia.com
बाहिरियो ठिमी ह’त्या का’ण्डका मृतक तीनै जनाकाे पो’ष्ट’मा’र्टम रिपोर्ट, केछ रिपाेर्टमा
काठमाडौं । भक्तपुरको मध्यपुरठिमी नगरपालिका–९ निकोसेरास्थित आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका सुदीप अधिकारी दम्पती र छोरा सुशान्तको भक्तपुरस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) मा श’व परीक्षण गरिएको छ । श’व परीक्षणको विस्तृत रिपोर्ट आउन बाँकी छ । तर, प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार सुदीप पत्नी सम्झना र छोरा सुशान्तको टाउकोमा चोट देखिएको छ ।
‘छोरा सुशान्तको टाउकोमा चार पटक र श्रीमतीको टाउकोमा तीन पटक दाउले हि’र्का’एको देखिन्छ,’ महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीपक थापाले भने–‘सुशान्तको घाँ’टी’मा हतियारले का’टे’को गहिरो चो’ट छ ।’
सुदीपको शरीरमा चोट छैन् । उनले विष खाएर आ’त्म’ह’त्या गरेको पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट पनि खुलेको छ । मुसा मार्ने ‘सेल्फस’नामक विषको दुईओटा बाहिरी खोल घरबाहिर बारीमा भेटिएको छ । विषको बट्टा घरको छतबाट फाल्दा बारीमा पुगेको हुनसक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।
मध्यपुरठिमी नगरपालिका–९ निकोसेरास्थित आफ्नै निवासमा कुकुरसहित एकै परिवारका तीनजनाको ह’त्या घटनामा प्रहरीले नयाँ तथ्य पत्ता लागेको छ । भक्तपुर निकोसेरामा घर झगडाले परिवार नै स’खाप भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ।
श्रीमती र छोराको टाउकोमा गहिरो चोट भए पनि घरमा बाहिरी मान्छेको प्रवेश नदेखिएकाले सुदीपले नै हत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
ह’त्यामा धा’रि’लो ह’ति’यार प्रयोग देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले छोराक श’वसँगै हतियार फेला परेको थियो। त्यस्तै ह’त्यामा प्रयोग भएको अचानो भान्सा कोठा फेला परेको छ ।
प्रहरीले एउटा कचौरामा चम्चासहित केही बस्तु सुकेको अवस्थामा छ। त्यो सल्फर (वि’ष) भएको प्रहरी अनुसन्धान टोलीको अनुमान छ। यी सबै प्रहरीले परीक्षणमा पठाउने तयारी गरेको छ। किचनमा भेटिएको दालभातमा नै वि’ष घोलेर खुवाएको हुनसक्ने देखिएपछि त्यहाँ रहेका बाँकी अंश परीक्षणका लागि संकलन गरिएको छ।
ससुरालीको २ लाख ऋणको विषयमा पनि उनीहरुबीच झगडा पर्ने गरेको थियो । सुदीपका भाइका अनुसार काम नगरेको हल्लिएर हिडेको केही काम नगरेको भन्दै भाउजुले दाइलाई गाली गरिरहन्थिन् ।
भक्तपुरको ठिमीमा घटेको ह’त्याका’ण्ड सेलाउन नपाउदै पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा अर्को घ’टना घटेको छ । पोखरिया छु’रा प्र’हारले बुवाले छोराको ह’त्या गरेका छन् । नगरपालिकाको वडा नं. ६ श्रीसियाका स्थानीय ७० वर्षीय लक्ष्मी साहले सोमबार राति ८ बजेतिर प्र’हार गरेको छुराले ३५ वर्षीय छोरा माधो साहको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
छुरा प्रहार गर्ने लक्ष्मी साहलाइ इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी निरीक्षक चन्दकुमार सिंहले बताए । छु’रा प्र’हारबाट गम्भीर घाइते भएका माधोको उपचारका लागि वीरगञ्ज लाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै बुटवलको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा एकजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५ की ४७ वर्षीया महिलाको उपचारको क्रममा सोमबार (आज) बिहान मृत्यु भएको हो ।
चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत एक जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिका–९ बस्ने ६२ वर्षीया वृद्धा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । उपचारको क्रममा आइतबार राति ११ः३० बजे उनको मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले जानकारी दिए ।
ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या आई भदौ १५ गते अस्पतालमा भर्ना भएकी उनमा १७ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनको कोभिड सघन उपचार कक्षमा उपचार हुँदै आएको थियो । हालसम्म चितवन जिल्लाका अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु हुने कोरोना संक्रमितको संख्या २७ पुगेको छ ।
दुई वृद्धाको घरमै मृत्यु भएको थियो । चितवनका १७, मकवानपुरका पाँच, नवलपरासी सुस्ता पूर्वका चार, बारा, गोरखा र कैलालीका एक÷एक जना संक्रमितको चितवन जिल्लामा मृत्यु भएको छ ।